Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Archives | 2015 | December
Posted on December 30, 2015 by freeburma
via moi http://ift.tt/1NPw2ar http://ift.tt/1KnLGaX
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) http://ift.tt/1ZAwzT5 http://ift.tt/Y2RpwJ
ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန် သတ်မှတ်ရေး သမ္မတအမိန့်ထုတ်ပြန်မည်
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွက် မြေနေရာ (၄၂၈၉.၃၂) ဧရိယာဧကအတိ အကျသတ်မှတ်ပြီး ယင်းနေရာကို ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖြစ် လွှတ်တော်က သဘောတူသည့်အတွက် သမ္မတမှ တရားဝင် အမိန့် ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမည်သည်။
ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက် ဒီဇင်ဘာလ(၂၉) ရက်က ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာတွင် ထောက်ခံမဲများသည့်အတွက် ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖြစ် သမ္မတမှ အမိန့်ထုတ်ပြန်သွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေဇုန်မြေနေရာအတိကျနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖြစ် သမ္မတ မှ အမိန့်ထုတ်ပြန်ရေးအတွက် လွှတ်တော်၏ သဘောထားရယူပြီး စက်ခလုပ်နှိပ် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရာ ထောက်ခံမဲ (၄၂၄)မဲ၊ကန့်ကွက်မဲ ( ၂၃)မဲ၊ ကြားနေမဲ(၂) ရှိခဲ့သည်။
ဧရိယာနယ်နမိတ်အတိကျနှင့် အထူးရေးဇုန်အဖြစ် သမ္မတက ၎င်း၏ အစိုးရ သက်တမ်းကုန်ခါးနီးအချိန်တွင် လွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက်ရယူပြီး အမိန့်ထုတ်ပြန်ဖို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကို ရခိုင်းတိုင်းရင်းသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ထောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းနှင့် ယင်းအပေါ်တွင်လည်း ပြည်သူများက စိုးရိမ်စိတ်နှင့် သံသယစိတ် ရှိခဲ့ကြောင်း မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်မှုမလုပ်ခင် လွှတ်တော် နာယကက ပြောကြားခဲ့သည်။
“သက်တမ်း ကုန်ဆုံးခံနီးအချိန်မှာမှ ကျောက်ဖြူအထူး စီးပွားရေးဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်ဖို့ တင်ပြ အတည်ပြုချက်အပေါ်နဲ့ အစိုးရရဲ့ ကျန်တဲ့ သက်တမ်းအတိုအတွင်းမှာ ဒီလို တင်ပြလာခြင်းဟာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရော ပြည်သူများ သံသယစိတ်နဲ့ စိုးရိမ်စိတ် ရှိတာတော့ အမှန်ပါပဲ" ဟု ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက လွှတ်တော်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖြစ် တရားဝင် အမိန့်ထုတ်ပြန်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် နှစ်ရက်တာ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဆွေးခဲ့မှုအရ အထူးစီးပွားရေဇုန်တည်ထောင်မှုကို ကိုယ်စားလှယ်များ နှစ်သက်ပေမယ့်လည်း ယင်းအထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့် ပါတ်သက်ပြီး အလျင်စလို ဆောင်ရွက်မည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်းလည်း သူရ ဦရွှေမန်းက လွှတ်တော်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
Kyaut Phyu Special Economic Zone
via မဇ္ဈိမ မာလ်တီမီဒီယာ http://ift.tt/1YNdXCp http://ift.tt/1nfHMox
Posted in Projects - စီမံကိန်းများ၊ လုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT, Projects, Recently Read	| Leaveacomment |
Posted on December 29, 2015 by freeburma
ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွင်း TNLA နှင့် RCSS တို့ တိုက် ပွဲ ဖြစ်
ကျောက်မဲမြို့နယ် ပန်ဆန်ကျေးရွာတွင် ရှမ်းပြည် တပ်မတော် တောင်ပိုင်း(RCSS/SSA)နှင့် တအာင်း (ပလောင်) အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA)တို့ ယနေ့ နံနက် ၅နာရီက ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ကြောင်း သတင်းရသည်။ပန်ဆန်ကျေးရွာကုန်းတွင် အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေသည့် TNLAက RCSSအဖွဲ့အား ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခြင်းခြင်းဖြစ် ကြောင်း ဒေသခံများ ပြောဆိုချက်အရသိရသည်။
The post ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွင်း TNLA နှင့် RCSS တို့ တိုက် ပွဲ ဖြစ် appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/1YKOolo http://ift.tt/1OYtTeJ
The post ဆန္ဒပြမှုနောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူကို ရှာဖွေဖို့ ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲအမိန့်ထုတ် appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/1IAummk http://ift.tt/1OYtTeJ
Posted on December 28, 2015 by freeburma
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းကို တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ – အောင်သက်၊ အီးပီအေ)
via မဇ္ဈိမ မာလ်တီမီဒီယာ http://ift.tt/1JbBhCs http://ift.tt/1nfHMox
၂ နှစ်ပေါင်းပြီး အကယ်ဒမီဆု ၂၂ ခု ချီးမြှင့်မည်
၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ ကျင်းပမယ့် ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲမှာ ၂၀၁၄ နဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၂[…]
The post ၂ နှစ်ပေါင်းပြီး အကယ်ဒမီဆု ၂၂ ခု ချီးမြှင့်မည် appeared first on DVB.
via DVB | DVB http://ift.tt/1Ud3Qjo http://burmese.dvb.no
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်း လုပ်ကွက်တွေမှာ လည်ပတ်အသုံးပြုနေတဲ့ အခွန်ဆောင်ပြီး တူးဖော်ရေး ယာဉ်၊ စက်ယန္တရား အရေအတွက်ဟာ လောလောဆယ် ဖားကန့်မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ရရှိထားတဲ့ စာရင်းတွေအရ စုစုပေါင်း အစီးရေ လေးထောင်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/22ugSit http://www.rfa.org
via moi http://ift.tt/1QPaiQe http://ift.tt/1KnLGaX
Posted on December 26, 2015 by freeburma
ကြေညာချက်အမှတ် – ၃/၁၂/၂၀၁၅
via NLD official http://ift.tt/1PofsPF http://ift.tt/1NL5t57
Posted in Election - ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ	| Tagged Election, Feedly, IFTTT, NLD, Recently Read	| Leaveacomment |
Posted on December 25, 2015 by freeburma
မြန်မာလူငယ်နှစ်ဦးကို သေဒဏ်ချမှတ်မှုအပေါ် ဆောင်းဦးလှိုင်၊ ကြည်ဖြူသျှင်၊ ဦးကိုကိုကြီး၊ ဦးမြအေးတို့၏ ဖွင့်ဟချက်
ဆောင်းဦးလှိုင် – တေးရေး၊ အဆိုတော် “နိမ့်ပါးနေရင် ဖိနှိပ်ရက်စက်ခံရမယ်၊ ဘဝအခြေအနေ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာဉာဏ်တွေမြင့်မားအောင် ကြိုးစားကြရမယ်၊[…]
The post မြန်မာလူငယ်နှစ်ဦးကို သေဒဏ်ချမှတ်မှုအပေါ် ဆောင်းဦးလှိုင်၊ ကြည်ဖြူသျှင်၊ ဦးကိုကိုကြီး၊ ဦးမြအေးတို့၏ ဖွင့်ဟချက် appeared first on DVB.
via DVB | DVB http://ift.tt/1QPN6kv http://burmese.dvb.no
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ အဖွဲ့ကို နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ပြောင်းလဲမည်
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ (FPPS) အား ပြောင်းလဲလာသည့် တိုင်းပြည်အခြေအနေအရ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် လာမည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်တွင် စတင် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်များ ဖိတ်ခေါ်နေကြောင်း သိရသည်။
The post နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ အဖွဲ့ကို နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ပြောင်းလဲမည် appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/1QPMTgY http://ift.tt/1OYtTeJ
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ၂ ဦး သတ်ဖြတ်ခံရမှုမှာ အပြစ်ရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ဦးကို ထိုင်းတရားရုံးက သေဒဏ် ချမှတ်လိုက်တဲ့အတွက် ဒီကနေ့ နေ့ခင်း ၃နာရီလောက်မှာ သံဃာတော်တွေအပါအ၀င် လူ ၁၀ ဦးလောက်ဟာ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးကို ရှေ့ရှုဖို့ဆိုတဲ့ စာတမ်းတွေ ကိုင်ဆောင်ပြီး ၁၅ မိနစ်လောက် ထိုင်းသံရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။
(သတင်းဓာတ်ပုံ Credit to ကိုရဲနောင်)
via Voice of America http://ift.tt/22rl9Dr http://ift.tt/Tf1V41
Posted on December 24, 2015 by freeburma
"ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ တက်လာတဲ့ အနိုင်ရ ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲကသာလျှင် ၀န်ကြီးချုပ်ကို ခန့်သင့်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်"
via Voice of America http://ift.tt/1J5VZUt http://ift.tt/Tf1V41
လာမယ့်နှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံကို တက်ရောက်ဖို့အတွက် အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီက ၀နဲ့ မိုင်းလားအဖွဲ့တွေကို ဖိတ်ကြားထားပေမဲ့ ဒီနှစ်ဖွဲ့ကတော့ တက် မတက် မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။ လောလောဆယ်မှာ NCA (ခေါ်) တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်စာချုပ် လက်မှတ်မရေးထိုးသေးတဲ့ အဖွဲ့ ၁၁ ဖွဲ့ကိုလည်း ဒီညီလာခံကို ဖိတ်ကြားဖို့ ရှိနေပြီး လက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့ အဖွဲ့တွေကတော့ အကုန်လုံးကို မဖိတ်ကြားရင် တက်ရောက်မယ့် အခြေအနေ မရှိကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုတော့…
via Voice of America http://ift.tt/1OLGYUi http://ift.tt/Tf1V41
ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ ကျင်းပရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဦးအောင်မင်း ဆွေးနွေး
လာမယ့် ဇန်န၀ါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံကျင်းပရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီနေ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီက ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း တို့ နေပြည်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအဆောင်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1JvDBiE http://www.rfa.org
Posted in Civil Wars - ပြည်တွင်းစစ်ဆိုင်ရာ	| Tagged Civil Wars, Election, Feedly, IFTTT, Recently Read	| Leaveacomment |
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များကို ကူညီဖို့ Peace Machine က ကျပ် ၁၀ သိန်းလှူ
တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ပွဲတွေကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီဖို့အတွက် Peace Machine လို့ ခေါ်တဲ့လူငယ်အဖွဲ့က ၈၈ မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်း ရုံးကို ငွေကျပ် ၁၀ သိန်း ဒီကနေ့ လာရောက် လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1OLGZYo http://www.rfa.org
Posted in Election - ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ	| Tagged Civil Wars, Election, Feedly, IFTTT, Recently Read	| Leaveacomment |